दाम्पत्य जीवन : तपाईंमाथि कतै धोका त भइरहेको छैन ? - Mero Mechinagar
दाम्पत्य जीवन : तपाईंमाथि कतै धोका त भइरहेको छैन ?
दाम्पत्य सुखका लागि भावनात्मक र व्यवहारिक तालमेल जरुरी हुन्छ । साथसाथै विश्वास, भरोसा, सद्भाव, सहयोग र प्रेमले दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय बनाउँछ ।
तर, कहिले काहीँ दाम्पत्य जीवनमा तालमेल मिल्दैन । हुन त व्यवहारिक जीवन चलाउने क्रममा सानोतिनो झगडा वा मतभेत हुनु सामान्य हो । किनभने सबैको सोंच, रुची, व्यवहार एकनास हुँदैन । यी समस्या त एकअर्काको संवाद र सहकार्यबाट सुल्झदै जान्छन् । दम्पतीहरु जति जति परिपक्क हुँदै जान्छन्, उत्तिनै घर–व्यवहारमा पनि सन्तुलन आउदै जान्छ ।
तर, घर व्यवहार ठीक हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ दम्पतीबीच फाटो आउन सक्छ । र, यो फाटो ल्याउने काम गर्छ, अविश्वास र आशंकाले । कुन अवस्थामा यस्तो स्थिती पैदा हुन्छ त ?
जब श्रीमान वा श्रीमतीले एकअर्कासँग कुरा लुकाउन थाल्छन् । वा धोका दिन थाल्छन् ।
सबै व्यक्ति मनको कुरा खोलेर बोल्ने स्वभावका हुँदैनन् । कोही धेरै बोल्छन्, कोही कम । कोही सार्थक कुरा बोल्छन्, कोही गफाडी मात्र पनि हुन्छन् । तपाईंको पार्टनर कम बोल्छन् वा धेरै ? त्यो महत्वपूर्ण भएन । यद्यपि उनी सधैजस्तो तपाईंसँग अन्तरंग कुरा गर्दैैनन् भने त्यसमा केही गडबड छ भनेर बुझ्नुपर्छ । पार्टनरले आफुसँग बोल्न रुची नराख्नुमा उनकै दोष मात्र हुँदैन, आफ्नो गल्ती पनि हुनसक्छ । त्यसैले पार्टनरले आफुसँग अरुबेला झै स्वभाविक ढंगले कुराकानी गर्न छाडेमा वा कुरा गर्न नचाहेमा तपाईंले त्यसको कारण खोज्नुपर्छ । साथसाथै यसले के पनि संकेत गर्छ भने तपाईंका पार्टनरले तपाईंलाई धोका दिदैछ ।
तपाईंको पार्टनर अरुबेला भन्दा बढी समय घरबाहिर बिताउन थालेमा पनि शंका गर्न सकिन्छ । हुन त कतिपय काम विशेषले पनि घरबाहिर बढी समय विताएको हुनसक्छ । यद्यपि उनी के कामले अल्झिएका हुन् भन्ने कुरा त तपाईंलाई थाहा हुनैपर्छ । पार्टनर कहाँ जान्छ, के गर्छ भन्ने कुरा सामान्य रुपमाले तपाईंले हेक्का राख्नुपर्छ । यस्तो कुरामा पनि दम्पतीले कुरा लुकाउनु हुँदैन । यदि पार्टनर धेरैजसो घरबाहिर जान्छन् र त्यसको कारण पनि खास खुल्दैन भने शंका गर्नुपर्छ ।
जब पार्टनर अरुतिर सम्बन्ध बढाउन थाल्छन्, तब तपाईंप्रति उनको लगाव घट्दै जान्छ । उनले तपाईंलाई समय दिदैनन्, कुराकानी गर्दैनन् । तपाईंबाट टाढा रहन खोज्छन् । यदि यस्तो लक्षण देखिएमा पनि तपाईंले शंका गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संस्थापन पक्ष बाहेकका कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेला आज